केपी ओली र माधव नेपालले यसरी गरेका थिए राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष/विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो । अर्थात पास भयो ।
सन्धिको मस्यौदा बनाउँदा नेपाली नेताहरुले बिजुलीको आवश्यकता मात्र बुझे । चलाख भारतलाई बिजुली बराबरी हुने देखाएर पानी एकलौटी पार्नु थियो । तर, देशको हितलाई हेरेर होइन, नेताहरु भारतीय समर्थनमा आफू बलियो हुने नियतका साथ अगाडि बढे । परिणाम नेपाल ठगिएन मात्रै, स्वाभिमानसमेत गुमायो ।
यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा नेपाल पक्षको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी थियो । भारतजस्तो महत्वाकांक्षी र उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले छिमेकबाट फाइदा लिइहालूँ भन्ने आकांक्षा राख्नु अनौठो होइन । अहिले पनि धेरै नेपाली नेताहरु भारत गएर आफ्नो देशको प्रगति के गरेमा हुन्छ भन्नेमा भन्दा भारतबाट अाफूले के सहयोग पाउन सक्छु भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्छन् । नेपाली नेताहरु महाकाली सन्धिमा पनि यो भन्दा फरक भूमिकाबाट प्रस्तुत भएनन् ।
महाकाली सन्धिबाट नदीको धेरैजसो पानी आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा भारत खुसी त भयो नै, नेपालका राजनीतिक दल र जनस्थरबाट आफ्नो चर्को विरोध होला भन्ने उसले सोचेकै थिएन । भारतले के बुझेको थिएन, छैन भने समभावका रुपमा सन्धि सम्झौता नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्किन्छ । महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जानासाथ नेपाली भूमिबाट सन्धिको विरोधमा आक्रोशको ज्वाला पोखियो । त्यस्तो अवस्थामा खर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न गाह्रो भयो । अन्ततः सन्धिको कार्यान्वयन स्थगित भयो । जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
भारतले छिमेकमा आफूविरोधी भावना फैलिएमा भोली संकटमा परिन्छ भन्ने नसोची हस्ताक्षर ग¥यो भने नेपाली नेताले आफ्नो देशको हित कहाँनेर छ भनेर खोजेनन् । यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ । मलाई यसो भन्न हिच्किचाहट छैन कि महाकालीमा पानीको हक बराबर नभएकाले यो सन्धि राष्ट्रघाती नै हो ।
स्वार्थमा जेलिएको महाकाली सन्धिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयाममा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो सन्धि सही नियतका साथ भएको हुन्थ्यो । भने देशले अहिलेको स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । यतिबेला ६ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भईसक्थ्यो । जुन दुवै देशले आधाआधा बाँड्नेवाला थिए । जसले अहिलेको विकराल लोडसेडिङको समस्या गुजार्नुपर्ने थिएन । भारतमा अहिले पानीको ठूलो समस्या छ । नेपाललाई पनि पानीको खाँचो छ । दुवै देशको आवश्यकता ड्यामबाट बाँडिने पानीले धान्थ्यो । नेताहरुले बुद्धि नपु¥याई सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पाप अहिले दुवै देशका नागरिकले भोगिरहेका छन् ।
(राधाकृष्ण मैनालीद्वारा लिखित ‘नलेखिएको इतिहास’ नामक पुस्तकबाट)
Posted by admin on Mar 16 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
6 Comments for “केपी ओली र माधव नेपालले यसरी गरेका थिए राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता”
March 19, 2017 - 12:11 pm
BaQPnp vgniimbmhrcd, [url=http://cleesvclkeko.com/]cleesvclkeko[/url], [link=http://tbpovshggwlk.com/]tbpovshggwlk[/link], http://lirvdmmvsnzx.com/
April 19, 2017 - 3:23 pm
G539Q1 Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Want more.